देशमा जताततै लुटतन्त्र : कोरोनाका नाममा ब्रह्मलुट – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
निर्वाचन आयोगका सहसचिवको सरुवा कानुनविपरीत !
चोरको आँखा पल्सरमा स् काठमाडौँमा दैनिक ४–५ वटा मोटरसाइकल चोरी !
सीमा विवादबारे छलफल गर्न भारत अनिच्छुक
बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि !
सरकारसँग वार्ताको तयारी चल्दै गर्दा एकाएक समातिए विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता बास्तोला।
देशमा जताततै लुटतन्त्र : कोरोनाका नाममा ब्रह्मलुट
| प्रकासित मिति : १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
लहान/१० मंसिर २०७७/कोरोनाले नियन्त्रणका नाममा प्रदेश २ का केही स्थानीय तहले ब्रम्हलुट गर्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, सप्तरीको बोदेबरसाइन र सिरहाको सिरहा नगरपालिका । यी दुई नगरपालिकाकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा गरेको खर्चमा व्यापक अनियमितता पाइएको हो ।
बोदेबरसाइन नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण खर्च विवरणअनुसार लाइफबोय साबुनको प्रतिगोटा मूल्य तीन हजार उल्लेख गरेको छ । यस नगरपालिकाले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य बढाएर खर्च उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
गत्त बुद्यबार यस नगरपालिकाले कुल दुई करोड २१ लाख रुपैयाँको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा एउटा लाइफबोय साबुनको तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत भएको थियो । ९५ पिस लाइफबोय साबुनमा नगरपालिकाले तीन लाख ६३ हजार नौ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो खर्च विवरणमाथि सर्वसाधारणले अलोचना गरेपछि नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवले प्रस्टीकरण दिँदै ९५ थान होइन, ९५ कार्टुन साबुनको विवरण हुनुपर्नेमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको बताए । यादवकै भनाइ मान्ने हो भने पनि एक कार्टुनमा एक सय ४४ थान साबुन हुन्छ । नगरपालिकाले ९५ कार्टुन साबुन किनेको हो भने एक थान साबुनको २६ रुपैयाँ तिरेको छ । तर, नगरपालिकाले चैत २६ पुनः १० कार्टुन ९१,४४० थान० साबुन किन्दा चार लाख ३१ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तान गरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । यो हिसाबले नगरपालिकाले एक थान साबुनमा दुई सय ९९ रुपैयाँ भुक्तान गरेको विवरण तयार पारेको छ ।
नगरपालिकाले चैत ३१ गते ६ हजार नौ सय १२ थान साबुन खरिद गर्दा दुई लाख ३८ हजार ६ रुपैयाँको बिल बनाएको छ । यो हिसाबले भने एक थान साबुनको २९ रुपैयाँ पर्न जान्छ । अनियमितता लुकाउन गोलमाल हिसाब सार्वजनिक गर्ने बोदेबरसाईन नगरपालिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको अनुसन्धानमा परेको छ । सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको टोली यस नगरपालिकामा छापा मारेर कोरोना नियन्त्रणको नाममा भएको अनियमित खर्चको कागजात जफत गरेर लगेका छन् ।
खर्च विवरणमाथि सर्वसाधारणले आलोचना गरेपछि नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवले प्रस्टीकरण दिँदै ९५ थान नभई ९५ कार्टुन साबुनको विवरण हुनुपर्नेमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको बताए । तर पछि किनिएको साबुनको मूल्य पनि प्रतिगोटा २ सय ९९ रुपैयाँ देखाइएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा दुई करोड २१ लाख ३४ हजार ३ रुपैयाँ खर्चमा व्यापक अनियमितता रहेको नगरपालिकाका कर्मचारी नै स्वीकार्छन् । स्यानिटाइजर, साबुन, झुल, म्याट्रेस, मास्क, ग्लोब्स लगायतका सामग्री खरिदमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको एक कर्मचारीले नागरिकसँग बताए । बिल, भरपाई, चेक, भौचरमा कहिँकतै मेल खादैन ।
यस नगरपालिकाले वैशाख २८ गते खरिद गरेको ७५ थान पिपिई गाउनको मूल्य २७ लाख ५२ हजार पाँच सय उल्लेख गरेको छ । प्रस्तुत हिसाबअनुसार एक सेट पिपिईको मूल्य ३६ हजार सात सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । एक थान सर्जिकल मास्कको मूल्य झन्डै ८० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ । एक थान ग्लोब्सको मूल्य सात सय उल्लेख छ । १५ थान सिरानीको खोलका लागि २२ हजार पाँच सयको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । यस हिसाबले सिरानीको एउटा खोलको मूल्य १५ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । नगरपालिकाको लेखा शाखाले तयार पारेको खर्च विवरणमा प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादवले छाप र हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गरेका छन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको खर्चमा भएको अनियमितता छताछुल्ल भएपछि नगरपालिकाले सबै सामानको मूल्य घटाएर कुल एक करोड २७ लाख २९ हजारको संशोधित खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । थानलाई कार्टुन बनाइएको छ । संशोधित खर्च विवरणमा चियापानीमा मात्र १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । चैत २६ गत्ते लाइफबोय साबुन १४ सय ४० थान खरिद गर्दा चार लाख ३१ हजार नौ सय ५५ खर्च भएको देखाइएको थियो भने पछि सच्याएर ३८ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ देखाइएको छ । चैत २१ गत्ते सगरमाथा ट्रेडर्स राजविराजबाट दुई लाख सात हजारमा ६ हजार आठ सय १२ पिस साबुन खरिद गरिएको विवरणलाई सच्याएर एक लाख ८३ हजार आठ सय ५९ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।
सिरहा नगरपालिकाले साउन २० गत्ते सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको खर्च बिवरणअनुसार एक थान तकिया खोलको २८ सय ७६ रुपैयाँ ३५ पैसा, एक थान तन्नको ८ हजार ७१ रुपैयाँ २५ पैसा उल्लेख छ । यसै बिवरणको आधारमा स्थानीयले गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार नगरपालिकाबाट कागजात लिएर गएका छन् । अख्तियारले छानबिनका लागि कागजात लिएर गएपछि नगरपालिकाले पुनः अर्को खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर कारवाही छल्ने प्रयत्न गर्यो । साउन २० गते सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरणअनुसार १ सय ११ थान तकिया खोलको तीन लाख १९ हजार २ सय ७५ उल्लेख गरिएको छ । साउन २८ गत्ते सच्याएर ३१ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको छ । ५ सय ५८ थान तन्नाको ४५ लाख ३७ हजार ७५ सार्वजनिक गरिएकोमा ४ लाख ६० हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ २२ पैसा सच्याइएको छ ।
पहिला जोखिम भत्ता९कर्मचारी खर्च० १३ लाख ५४ हजार सार्वजनिक गरिएको थियो । यो शिर्षकमा खर्च ५७ लाख ६० हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्किने कार्यका लागि मजदुरहरूको पारिश्रमिक रकम भुत्तानी शीर्षक थपेर १८ लाख ३६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । पहिला ५ करोड ९० लाख ८६ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ खर्च सार्वजनिक गरेकोमा पछि ५ करोड ९१ लाख १८ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुर्याइएको छ ।
यता, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले कोरोनाको नाममा १ करोड ३४ लाख ३१ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ खर्चको एकमुष्ट हिसाब प्रशासनलाई बुझाएको छ । अख्तियारले खर्च बिवरणको आधारमा धमाधम कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएपछि यस गाउँपालिकाले खर्चको श्रेस्ता मिलाउँदै अनियमितता ढाकछोप गर्न जुटेको छ । यस गाउँपालिकामा खर्च बिवरणको कागजात नियन्त्रणमा लिइए भ्रष्टाचारको चाङ फेला पर्ने गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूकै दाबी छ । खर्चको पूर्ण विवरण लुकाएर विनाशीर्षक गोलमटोल हिसाब प्रशासनलाई बुझाएर गाउँपालिका अनियमितता लुकाउन खोजेको ती कर्मचारीले बताए ।
यस गाउँपकिलाका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवकाअनुसार कोरोनाको खर्च विवरण उनीहरूलाई समेत दिइएको छैन् । कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कहाँबाट कति मूल्यमा कुन सामान खरिद भयो भन्ने हिसाब विवरण आफूहरूले माग्दा पनि नपाएको अध्यक्ष यादवले बताए । कोरोनाको नाममा स्थानीय तहले मच्चाएको लुट विवरण छताछुल्ल हुँदै गएको छ । शीर्षक खुलाएर खर्च सार्वजनिक भए अनियमितताको पोल खुल्छ भनेर सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका जस्तै यहाँ अधिकांश पालिका विवरण लुकाउनमा व्यस्त छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मिथिलेश यादवले लेखेका हुन ।
कस्ले कस्लाई कम्जोर पार्ने : नेकपामा कसको रणनीति के ?
मिलापत्रमै टुंग्याइन्छ बलात्कार घटना
निर्वाचन आयोगका सहसचिवको सरुवा कानुनविपरीत ! १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
चोरको आँखा पल्सरमा स् काठमाडौँमा दैनिक ४–५ वटा मोटरसाइकल चोरी ! १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
सीमा विवादबारे छलफल गर्न भारत अनिच्छुक १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि ! १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
सरकारसँग वार्ताको तयारी चल्दै गर्दा एकाएक समातिए विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता बास्तोला। १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरमा झाँकी सहितको पदयात्रा १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
टिम नेपो चितवनले दियो भरतपुर कारागारलाई ८०८ थान पुस्तक। १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
अमेरिकामा आपत् : विश्व जगतले गर्‍यो भत्सर्ना, बाइडेनको जित आधिकारिक १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
भारतमा देखियो बर्ड फ्लू, दक्षिणी नाकामा कडाई ! १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
अख्तियारमा लान चोलेन्द्र श्रीमान् किन आतुर ? १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे, बस्न्यातलाई थुना। १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३
वैशाखमा चुनाव नभए ओली संकटकाल लगाउने तयारीमा १ १० मंसिर २०७७, बुधबार ०३:१३